နည်းလမ်းသုံးခု-ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း | The Third Way - Crisis Conversion | Real Conversion
၂ဝ၁၄ခုနှစ်၊ မတ်လ (၉ )ရက် သခင်ဘုရား၏နေ့ရက် ညနေပိုင်းတွင် လောဒ့်အိန် ဂျယ်ရှိ အသင်းတော်တွင် ဟောကြားသောတရားဒေသ နာဖြစ်သည့်
Iain H. Murray ဟောကြားသော တရားဒေသနာဖြစ်သည့်
]''တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊တစုံတယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယော်ရှိ၏။သားအငယ်သည်အဘထံသို့သွား၍၊အဘ၊အကျွန်ုပ််ရထိုက်သောအ မွေဥစ္စာကိုဝေ၍ပေးပါဟုတောင်းပန်လျှင်၊အဘသည်ဥစ္စာများကိုဝေ၍ သားတို့အားပေးလေ၏။ထို့နောက်များမကြာ၊သားအငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုသိမ်းယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့သွားပြီးလျှင်၊ထိုပြည်မှာကာမ ဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအားဖြင့်ဥစ္စာဖြုန်းတီး၍၊ရှိသမျှကုန်သောအခါ၊ထို ပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်၍၊သူသည်အလွန်ဆင်းရဲ ခင်းသို့ရောက်၏။ထိုအခါပြည်သားတစ်ယောက်ထံသွား၍အစေခံလျှင် ဝတ်တို့ကိုကျောင်းစေခြင်းငှါသူ့သခင်သည်တောသို့စေလွှတ်သဖြင့်သူသည်ဝတ်စားတတ်သောပဲတောင့်ကိုပင်စားချင်မတတ်ငတ်မွတ်လျက် နရ၏။အဘယ်သူမျှအစာကိုမကျွေး။ထိုအခါသတိရလျှင်ငါ့အဘ၏ အိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝစွာစားရကြ၏။ငါမူကား၊ဤပြည်၌သေအောင်အငတ်ခံရ၏။ငါထ၍အဘထံသို့သွားမည်။အဘ၊အကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ကို၄င်း၊ ကိုယ်တော်ကို၄င်း ပြစ်မှားပါပြီ။ ယခုမှစ၍ကိုယ်တော်၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။သူငှါးအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါ။'' (လုကာ ၁၅း၁၁-၁၉ )
ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားသည့်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ပထမတစ်မျိုးမှာ ''လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ''ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ ''သခင်ဘုရား၏ကယ်တင် ခြင်း'' တို့ဖြစ်ကြသည်။ဤနည်းစနစ်နှစ်ခုစလုံးတွင် မှားယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပေသည်။အ ကြောင်းမှာ၁၈၅၉ခုနှစ်၌ဖြစ်ပျက်သည့် နိုးထမှုကြီးကတည်းက အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောလူ မျိုးများကြား၌ဝိညာဉ်ရေးရာနိူးထမှုတွင်ဤ နည်းစနစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ဘုရားသခင်အသုံး ပြုတော်မမူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တရားဟောဆရာခေါင်းဆောင်များကလည်း ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်ဝင်အများစုမှာ ပြောင်းလဲပြီးသောသူများမဟုတ်ကြဟုဆိုကြသည်။သေလုဆဲဆဲလူမျိုးတစ်ခုကိုတရာဟောခြင်း ဟူသော ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်တွင် ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေ Dr. C. L. Cagan နှင့် ကျွနု်ပ်သည် ဆန်းဒေးစကူးဆရာများ၊ သင်းထောက်များ၊ သင်းအုပ်မိန်းမများနှင့် သင်းအုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် ဧဝံဂေလိယုံကြည်သူများနှင့် ဖန်တမင်တဲယ်ယုံကြည်သူများ ပျောက်ဆုံးနေကြ ကြောင်းဖော်ပြသည့် ထိုသို့သောခေါင်းဆောင်များကို ကိုကားဖော်ပြထားသည်။ ီမ. ဗ. ျွှ ွှသဖနမ ကဧဝံဂေလိအသင်းတော်ရှိ လူဆယ်ယောက်တွင် တစ်ယောက်ပင် အသစ်တဖန်မွေး ဖွားခြင်းအကြောင်းကောင်းစွာသိရှိနားလည်သူမရှိဟုဆိုထားသည်။ ွှနထျေ ပြည်နယ်ရှိ Dallas နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရှိနာမည်ရတောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာတပါးဖြစ်သူ ီမ. ျွှ. ဗ. Criswell က''ကောင်းကင်ဘုံ၌သူ၏အသင်းသား ၂၅ရာခိုင်းနှုန်းကို မြင်တွေ့ခွင့်ရလျှင်ပင် အလွန်အံ့သြလိမ့်မည်''်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။၁၉၄ဝခုနှစ်ကလူငယ်လေးဖြစ်သောသူပီလီဂရေဟမ်ကလည်း ကျွနု်ပ်တို့အသင်းသားများ၏၈၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ ''မပြောင်းလဲကြသေး ကြောင်း'' ကြော်ငြာခဲ့သည်။ Dr. Monroe ‘Monk” Parker က ဖန်တမဲင်တဲယ်လ်အသင်းတော်များကိုပြောဆိုသောအခါ''ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းသားထက်ဝက်ခန့်ပြောင်းလဲလာကြောင်းတွေ့ရသောအခါဤသည်မှာကြီးမားသည့်နိူးထမှုဖြစ်ကြောင်း''ဆိုခဲ့သည်၊ တကယ်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ပြောင်းလဲသည့် တရားဟောဆရာ ထက်ဝက်ခန့်တွေ့ရှိရလျှင် ယင်းမှာကြီးမားသည်နိုးထမှုပင်ဖြစ်ပေသည်။ (Monroe “Monk’’ Parker, Through Sunshine and Shadows, Sword of the Lord Publishers, 1987, pp. 61, 72).
ဤပုံသဏ္ဌာန်အားလုံးကို သေလုဆဲဆဲလူမျိုးတစ်ခုကိုတရားဟောခြင်း တည်းဟူသော စာအုပ်တွင်သူတို့၏ဇစ်မြစ်မှစ၍ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။(စာ-၄၂၊ ၄၃ ) Dr. W. A. Criswell, Dr. “Monk” Parker, Dr. A .W Tozer နှင့် ပီလီဂရေဟမ်တို့ဖော်ပြသောဦးရေ မှာတကယ်တော့ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်သာဖြစ်ပါသည်။သို့ရာတွင်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင်တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းမှုရှိနေသည်ကိုတော့ပြသပေသည်။ကျွန်ုပ်ပြောဆိုသကဲ့သို့ပဲဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်နှစ်ခုဖြစ်သည့်]]လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ}}နှင့်]]သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း}}တို့ကိုစစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်အသုံးမပြုခဲ့ပေ။
ပထမနည်းစနစ်မှာ]]လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ}} ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ ယနေ့ခေတ်တွင် ဧဝံဂေလိအသင်းတော်နှင့်ဖန်တမဲင်တဲယ်အသင်းတော်တော်တော်များများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိ ကြသည်။ ဤနည်းစနစ်သည် ]]ခရစ်တော်နှလုံးသားထဲတွင်နေရာယူရန်တောင်းဆိုခြင်းတည်း ဟူသောအပြစ်သား၏ဆုတောင်းချက်ကိုရွက်ဆိုရန်}}ပျောက်ဆုံးသောလူများကို ရရှိမှုပေါ်တွင် မူတည်ပေသည်။ထို့နောက် အသက်တာပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ဘုရားကျောင်းတက်ရန်ပင်ငြင်း၍ အပြစ်ထဲနစ်မွန်းနေသည့် ပျောက်ဆုံးသောလူများကို ကယ်တင်ခြင်းရသည် ဟု ယုံမှတ်ရပေ သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးပြုပြောဆိုသည့်နယ်ပယ်၌ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် အသက် ရှင်နေရသောလူ သန်းပေါင်းများစွာရှိကြသည်။
ဒုတိယနည်းစနစ်မှာ ]]သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း}} ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ]]လွယ်ကူ သောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ}} ဆန့်ကျင်လျက်ထွက်ပေါ်လာသောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤနည်းစနစ်သည် ပထမနည်းစနစ်ကို ပြုပြင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဤနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသောသောသူများသည်အခြားသူများထက်သာ၍ အလင်းကိုတွေ့ရှိကြသော်လည်း သူတို့၏နည်းစနစ်များကိုတော့ ကောင်းမွန်သောနိူးထမှုတွင်အသုံးမပြုကြသည်သာမက အသင်းတော်၌ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများပေါင်းစည်းလာကြစေရန် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုကြခြင်း လည်းမရှိကြပေ။ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုသော တရားဟောဆရာများသည် ဥပဒေမဲ့များနှင့်]]လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ}}တို့၏အပြစ်များကို နောင်တတရားဟု ခေါ်သော ခံယူချက်များဖြင့် ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ဤအရာက ပျောက်ဆုံး သူ၏]]ဆင်ဒါမင်နီအယူဝါဒ}}ပုံစံကိုင်စွဲမှုနှင့်အလုပ်မှန်ကန်မှုပုံစံကိုင်စွဲမှုတို့တွင်အကျိုးသကf
ရောက်စေလေ့ရှိပါသည်။ ''ဆင်ဒါမင်နီအယူဝါဒ''ဟူသည်မှာ ယေရှုခရစ် ကိုယ်တော် တိုင်ထက် သမ္မာကျမ်းစာရှိကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ခံယူချက်များကိုသာယုံကြည်လက်ခံသော အယူ ဝါဒဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခြင်း ထက် သမ္မာကျမ်းစာရှိကျမ်းပိုဒ်များကို ပို၍အားကိုးအားထားပြုသည်။ဤအယူဝါဒရှိသည့်တရားဟောဆရာတစ်ပါးက''ကျွနု်ပ်တို့ သည််ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအရာအပေါ်မှာအားကိုးယုံကြည်မှုရှိရမည်ဟုဆိုခဲ့ သည်။ သူကိုယ်တိုင်သိရှိထားခြင်းမရှိသော်လည်း ဤသည်မှာ ''ဆင်ဒါမင်နီအယူဝါဒ''၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သာဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏အဆိုအရ အပြစ်သားသည် ခရစ်တော် ကိုယ်တော်တိုင်ထက် သမ္မာကျမ်းစကား၏သွန်သင်ချက်ကို ယုံကြည်လက်ခံပါမူ ကယ်တင် ခြင်းရရှိမည်ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်။ Dr. Martyn Lloyd-Jones ရေးသားထားသည့် သန့်ရှင်း သူများ-သူတို့၏မူလဇစ်မြစ်များနှင့် ဆက်ခံသူများ စာအုပ် စာမျက်နှာ၁၇ဝ-၁၉ဝ ရှိ ''ဆင်ဒါမင်နီအယူဝါဒ'' နှင့်သက်ဆိုင်သော အခန်းကိုလေ့ လာကြည့်ပါ။ ဆင်ဒါမင်နီအယူဝါဒနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာကိုဖတ်ရှုလေ့ လာနိုင်ရန် ဤနေရာ တွင် နှိပ်ပါ။
ခရစ်တော်ခေတ်တွင်အသက်ရှင်ကြသောဖာရိရှဲများသည် ''မည်သည့်လွယ်ကူသောယုံ ကြည်ခြင်းဝါဒ''ကိုမျှယုံကြည်ကြခြင်းမရှိပါ။ သူတို့သည် အပြင်ပိုင်းသန့်ရှင်းသောအသက် တာဖြင့်သာအသက်ရှင်ကြသည်။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို အမြဲမပြတ်လေ့လာကြပြီး ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ သူတို့အသက်တာ၌လိုအပ်သောအရာကားအဘယ်နည်း။တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ၄င်းမှာ ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုက သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ-
“ကျမ်းစာအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုကျမ်းစာပင် ငါ၏သက်သေဖြစ်၏။ သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင် ငါ့ထံသို့လာခြင်းငှါအလိုမရှိကြ။ (ယောဟန် ၅း၃၉-၄ဝ)
C. H. Spurgeon က ''စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိူင်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှု ပေါ်အခြေပြု၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တွင်ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။'' (''ယုံကြည်ခြင်းခိုင်လုံမှ'' The Metropolitan Tabernacle Pulpit, အတွဲ ၉၊ ခရီးသွားပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ၁၉၇၉ ၊စာ-၅၃ဝ)
ထိုသို့သောတရားဒေသနာအတိုင်းပင် Spurgeon ကသမ္မာကျမ်းစာကိုသိရုံသက်သက် အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်မဟုတ်။ ၏ကယ်တင်ရှင်၏ လက်တော်၌အ ြွကင်းမဲ့စွာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအားကိုးယုံကြည်ပုံအပ်မှသာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုဆိုထား ပါသည်။(ထပ်၍ )
စားအစာရှိကြောင်းကိုသိ၍နှမြောမိသည်။(လုကာ၁၅း၁၇)သို့သော် ထိုသို့သိရုံသက်သက် ဖြင့်သူ၏ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမှကယ်လွှတ်ခြင်းမရှိပေ။''အစားအစာ''ကိုလက်ခံရယ
ရန် ခမည်းတော်ထံသို့ သူကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်လာရမည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းသက်သက်ဖြင့် အဘယ်သူမျှကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်။လူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိတော် မူခြင်းမရှိဘဲ Westminster Catechism ကဲ့သို့သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်လက်ခံနိူင်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သမ္မာကျမ်းစာကို ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါပညာကိုပေးနိူင်သောသမ္မာကျမ်းအဖြစ်ဖော်ပြထားပါသည်။( ၂တိ ၃း၁၅ )သမ္မာ ကျမ်းစာကိုယုံကြည်၍ပုံအပ်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းမဖြစ်စေနိူင်ပါ။ ၄င်းသည် ယေရှုခရစ် ကိုသာ ညွှန်ုပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သာ''ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်''သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သား၏ဆုတောင်းချက်စကားလုံးများကိုရွက် ဆိုခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်နိူင်။ယေရှုခရစ်နှင့်ပါတ်သက်၍သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းမရောက်နိူင်ပေ။ သခင်ယေရှုကိုနာခံခြင်းအား ဖြင့်လည်း ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်နိူင်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ပေသည်။ ( ၂တိ ၃း၁၅ ) သမ္မာကျမ်းစာက ''ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏''ဟုဆိုရာတွင် ထင်သာမြင်သာဖော်ပြထားပါသည်။(ဧဖက်၂း၈)ထိုယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းယေရှုခရစ်တပါးတည်းကို သာဗဟိုပြုသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက '' သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ၊ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်''ဟုဆိုထားသည်။(တမန်၁၆း၃၁ ) ကျွန်ုပ်၏ကောလိပ် ကောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်း Dr. C. L. Cagan က ''ကျွနု်ပ်တို့သည်အခြားအရာများထက်ကြီးမားသောယေရှုကိုတိုက်ရိုက်ယုံကြည်ခြင်းအာ
ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိူင်သည်၊ထို့အပြင်သူသည် ခပ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မှီ ဖြစ်တော်မူ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သာတည်ကြ၏( ကော ၁း ၇)ဟုဆိုထား သည်။(သေလုဆဲဆဲလူမျိုးတစ်ခုကို တရားဒေသနာဟောကြားခြင်း၊စာ-၂၂ဝ ) ဤအခြေခံ သမ္မာတရားတစ်ခုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ''လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ''နှင့်''သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း''ပုံသဏ္ဌာန်အားလုံးကို ကုသပေးလိမ်းမည်။း
ဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်တင်ပြလိုသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ''တတိယနည်းလမ်းဖြစ် သည့် ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း''ဖြစ်သည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာ ''အပြစ်သား၏ဆု တောင်းခြင်းကို ရွက်ဆိုခြင်း''အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ လုံးဝပြစ်မှားသောသူများမလုပ်ဆောင်နိူင်သည့်ယေရှုခရစ်ကိုကြိုးစားဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။''တတိယနည်းလမ်းဖြစ်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း''မှာသမ္မာကျမ်းစာနည်းလမ်းတကျစစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။''ပြောင်းလဲခြးင်အကျပ်အတည်း''ဟူသောစကားလုံးကို ကျွန်ုပ်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ထားသော်လည်း ဤသည်မှာ ''ခေတ်ဟောင်းကျောင်း''ရှုထောင့်များ အတွက် အမည်နာမတစ်ခုသာဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်မှာ ကောင်းမွန်သော ပရိုတဲ့တင်းနှင့် နှစ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အမည်နာမအသစ်သာဖြစ်သည်။''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်းသည်''မာတင်လူသာကြုံတွေ့ခဲ့သော အရာပင်ဖြစ်သည်။ ''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အ တည်း'' မှာ ဂျွန်ဘိုင်ယန်၊ ဂျွန်ဝယ်စလီ၊ ဂျော့ဝှိုက်ဖီးလ်၊ နှင့် စီ၊အေ့စ် စပါဂျွန်တို့ ကြုံ တွေ့ခဲ့ရသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ''အပြစ်သားဆုတောင်းချက်'' နှင့် ''သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း''မတိုင်မှီစစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းရှိသည့်အခြားလူ တိုင်းမှာ ခေတ်စားလာ ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ခြင်းနှင့်ပရိုတဲ့တင့် ဘိုးဘေးများ၏ခေတ်ဟောင်း''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း''ရှုထောင်မှာပျက်စီးခဲ့
၁။ပထမအချက်တတိယနည်းလမ်းတွင်ရှိသည့်''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း'' ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ လူ၏''ဆိုးသွင်းခြင်း''ဖော်ပြချက်
''အပြစ်သားဆုတောင်းချက်''နှင့်''သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း''အားဖြင့်အစားထိုးခြင်း ပြုသည်အထိ ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ ခေတ်ဟောင်း''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း''အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ကြံရွယ်သောအရာကို ပုံဥပမာပေးရန်အတွက် ပျောက်သောသား၏စာရင်းကို ရွေး ချယ်ခဲ့ပြီးပြီ။
ပျောက်သောသားမှာ အပြစ်သားဖြစ်သည်။ သူ၏အမွေဥစ္စာကိုတောင်းယူပြီး အိမ်မှ ထွက်၍''ဝေးလံသောတိုင်းနိူင်ငံသို့သွား၍မကောင်းသောအသက်ရှင်မှုဖြင့် မိမိဥစ္စာကိုဖြုန်းတီး ခဲ့သည်။'' (လုကာ ၁၅း၁၃ ) ဤသည်မှာ တနည်းမဟုတ်၊ တနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ် ဆောင်နေသောအရာပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ထံပါးမှထွက်၍ သူမပါဘဲအ ပြစ်ထဲတွင်အသက်ရှင်နေကြသည်။ ပျောက်သောသားသည် ဖခင်ကိုငြင်းပယ်ထားခဲ့သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်သည်။ တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျောက်သော သားက ၄င်း၏အပြုအမူအားဖြင် ဖခင်ကိုအဘယ်မျှလောက်ငြင်းပယ်ကြောင်ဖော်ပြသကဲ့သို့ ကယ်တင်ရှင်ကိုုငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။
မထီမဲဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငြိုငြင်သောသူ၊နာကြည်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွင်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ သူတပါးမျက်နှာလွှဲခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။မထီမဲ့မြင်ပြု ခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၍၊ငါတို့သည် မရိုသေကြ။ ( ဟေရှာ ၅၃း ၃ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးတွင် ဘုရားသခင်နှင့် သူ့သား၏ရန်သူများဖြစ်ကြသည်။ ပျောက်သောသားသည် ဖခင်၏နည်းဥပဒေသအောက်တွင် အသက်မရှင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်အောက်၌အသက်မရှင်ဘဲ ချိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။
''အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်၏တရားတော်အလိုသို့မလိုက်တတ်။'' (ရောမ ၈းရ )
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် ကယ်တင်ရှင်ကို လုံးဝဆန်ကျင်ပုန်ကန်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့အတွင်းပိုင်း၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ ဆိုးသွင်းနေသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ''ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိကြကြောင်း''၊ ''လောက၏ဘုရား'' ဖြစ်သောစာတန်၏ထိန်းချုပ် မှုအောက်တွင်ရှိနေကြကြောင်း မိန်ဆိုထားသည်။ (ဧဖက် ၂း၁ ) ြွ။စြွ ြွစ ချေူျ=ဓစမေေxငညိနညအဓြွ
သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသူအမှန်တကယ်မဟုတ်ခဲ့လျှင် ထိုအရာမှာ သင်၏ ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်မဟုတ်ပေ။ တမန်တော်ပေါလုက ]]လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်တရား ၏လက်အောက်၌ရှိနေကြသည်၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တစ် ယေါက်မျှမရှိ}} ဟူ၍ဆိုထားပါသည်။ ( ရောမ ၃း၉-၁၀ )သင်၏ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေ ကို ပရောဖက်ဟေရှာယက ဤသို့ဖော်ပြထားပါသည်။
]]ဦးခေါင်းသည်အနာသက်သက်ရှိ၏။နှလုံးသည်လည်းခွန်အားအလျှင်းမရှိခြေဖဝါးမှသည်ဦးခေါင်းတိုင်အောင်ကျန်းမာခြင်းမရှိ၊စုတ်ရှသောအနာ၊ထိခိုက်၍ရောင်သောအနာ၊ရီယွဲသောအနာသက်သက်ရှိ၏။}} (ဟေရှာ ၁း၅-၆ )
ဤသည်မှာ ပျောက်သောသား၏ဘဝမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက် အရ ]]သူသည် အခြားသောပြည်သို့သွား၍ ပြည်သားများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပေါင်းဖက်သည့်အ ပြင် ဝက်များကိုကျွေးမွေးရန် မိမိကွင်းပြင်သို့မိမိကိုယ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပေ သည်။ ထို့ပြင် မိမိ၏ဝမ်းကို ဝတ်စာဖြင့်ပြည့်စေလို့သည့်ဆန္ဒရှိလာသည်။ သူ့အားအ ဘယ်သူမျှစားစရာကိုမပေးပေ။}} (လုကာ ၁၅း၁၅၊၁၆ ) ဤသည်မှာ သင်၏အခြေအနေ လည်းဖြစ်ပေသည်။]]ထိုပြည်သားတို့သည်}} သင်၏စိတ်နှလုံးကို ထိန်းချုပ်သည့်နတ်ဆိုးပင် ဖြစ်ပေသည်။ (ဧဖက် ၂း၂ )သင်သည် စာတန်၏ကျေးကျွန်၊ စာတန်၏အလိုဆန္ဒအတိုင်း အသက်ရှင်သောအသက်တာ၊]]အပြစ်တရား၌သေလျက်}} ဆိုးသွင်းသောအခြေအနေတွင် အ သက်ရှင်နေပေသည်။(ဧဖက် ၂း၅ )ယင်းကို လုံးဝပျက်စီးသွားခြင်းဟုဆိုသတည်း။ ပျောက် သောသား၏ဘဝအခြေအနေလည်းဖြစ်ပေသည်။ဖခင်ကပင် ]]သေသည်}}ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ]]ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်}}ဟူ၍လည်းကောင်းဆိုခဲ့သည်။]]ငါ့သားသည် အထက်ကသေ၏၊အခု ပြန်ရှင်၏၊ အထက်ကပျေက်၏၊ယခုပြန်တွေ့၏}}ဟုဆိုခဲ့သည်။ (လုကာ ၁၅း၂၄ )
သင်သည် ခရစ်တော်ကိုတော်လှန်ပုန်ကန်သောအခါ လွတ်လပ်မှုရှိသည်ဟုဆို၏။ သို့သော်သင်သည် အပြစ်၌နစ်မွန်းပြီးအမှန်တကယ်ကျေးကျွန်ဖြစ်သည်သာမက စာတန်၏ ချုပ်ကိုင်မှုကိုခံလျက်ဘုရားသခင်၏အရာ၌ သေလျက်ရှိပေသည်။ သင့်ကို နတ်ဆိုးက ထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်၍ အပြစ်လုပ်ရန်စေခိုင်းမှုကို လွပ်လပ်မှုဟုသင်ထင်မှတ်ထားသည်။ အပြစ်လုပ်ဆောင်ရန်လွပ်လပ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပျောက် သောသားကဲ့သို့ပင် သင်၏ဘဝသည်ဆိုးသွင်းပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပေသည်။သင်သည် သင်၏ပျောက်ဆုံးနေသောအခြေအနေကိုဖော်ပြသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ငြင်းခုံလိမ့် မည်။
၂။ ဒုတိယအချက်-]]ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း}}၏တတိယမြောက်နည်းလမ်း တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အပြစ်သားတစ်ယောက်မိမိ၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်း နှင့်ဆိုင်သော နိူးထမှုအကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
]]ထိုအခါသတိရလျှင်၊ ငါ့အဘ၏အိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည် ဝစွာစားရကြ၏။ ငါမူကား ဤပြည်၌သေအောင်အငတ်ခံရ၏။}} ( လုကာ ၁၅း၁၇ )
''သူသည်သတိရလာသောအခါ'' ဟူသည်မှာ အသိဝင်လာသောအခါ၊ အပြစ်တရား ထဲမှနိူးထလာသောအခါ၊ဘဝမဲ့အပြစ်ထဲမှ သတိလည်လာသောအခါဟုဆိုလိုပေသည်။ သူသတိရလာသောအခါ၊ သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်လာသောအခါ မိမိကိုယ်ကိုသေ ကြောင်းသိရှိလာပေသည်။ဤသည်မှာ အပြစ်သားတစ်ယောက်၏ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်း၊ အပြစ်တရာထဲ၌ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအသက်ရှင်ခြင်းမှ နိူးထခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာဖြစ်နိူင်သည်။ ဤအရာအတည်ပြုခြင်း တွင် စပါဂျွန်က ဤသို့ဆိုထားသည်။
စိတ်မနှံသောလူသည် သူ၏စိတ်မနှံခြင်းကိုလုံးဝမသိရှိပေ။သို့သော် သူသတိပြန်ရလာသောအခါသူလွတ်မြောက်လာသောအရာမှရှိနေည့်အခြေအနေကိုနာကျင်စွာတွေ့မြင်ရသည်။မှန်ကန်သောအခြေအနေသို့လှည့်ပြန်လာသောအခါပျောက်သောသားသည်မိမိကိုယ်ကိုလာခဲ့့ သည်။ (C.H. Spurgeon, MTP, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume 17, p. 385).
ဤနိူးထမှုကြီးမှာ အိမ့်မွေ့ချသောလူတစ်ယောက် တဖန်နိူးလိုက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂရိဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွင်ဝက်အဖြစ်သို့ပြောင်းသောလူများဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယူလစီ0x္ထုသည် ညို့ယူဖမ်းစားသောသူကို သူတို့၏မူလလူပုံစံအတိုင်း သူအ ပေါင်းအပါများကိုပြန်ပေးရန်တွန်းအားပေးထားသည်။ပျောက်သောသားကိုလည်း သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်က ထိုနည်း၄င်း နိူးထစေခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှသာ သူသည် မျှော်လင့်ချက် မဲ့ပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်းကို သတိမူလာခဲ့သည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါက သူ၏စာ၌ ဤသို့ရေးသားထားသည်။
''အိပ်ပျော်သောသူနိူးလော့၊သေခြင်းမှထလော့။သို့ပြုလျှင်ခရစ်တော် သည် သင့်အားအလင်းကိုပေးလိမ့်မည်။'' (ဧဖက် ၅း၁၄ )
သို့ရာတွင် ပျောက်သောအပြစ်သား၏''ပြန်လည်နိူးထခြင်း''သည် ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံတော်မမူပေ။ ထို့ပြင် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်း၏တတိယမြောက်နည်းလမ်းတွင် အကျပ်အတည်းဖြစ်လာသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ Puritan Richard Baxter (1615-1691 )က အမြဲတစေရည်ညွှန်းပြောဆိုသကဲ့သို့ လူများကို နိူးထစေသည့်အဖြစ်ဆုံးနည်း လမ်းမှာ တရားဟောခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။တရားဟောဆရာအများစုက ဧဝံဂေလိဟောကြ သောအခါ ရောမ ၁ဝး၁၃ ကိုအမြဲကိုးကားပြောဆိုကြသည်။သို့သော်''ဟောပြောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ကြားနိုင်ကြမည်နည်း'' ဟူသော နောက်ကျမ်းပိုဒ်ကိုမူလစ်လျူရှုထားကြသည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် အသင်းတော်၌ ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာဟောပြောချက်ကိုလုပ်ဆောင် ရပေသည်။''ဟောပြောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ကြားနိုင်ကြမည်နည်း။'' ထို့ပြင် တရားဟော ဆရာသည်ပင် ပျောက်ဆုံးသူများကို ဧဝံဂေလိတရားမည်သို့ဟောပြောရမည်ကို လေ့လာ သင်ယူရပေမည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ပြီး မည်သို့ ဝေငှသက်သေခံရမည်ကိုသိရှိသော တရားဟောဆရာ အလွန်နည်းလှပေသည်။ အမှန်ပင် နည်းလှသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာတရားဟောချက်ကို မကြားရသည်မှာ အတော်ပင် ကြာညောင်းလှပေသည်။ဤသည်မှာ အတိတ်ကအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်သည်။ လူအများစု သည် ဘုရားကျောင်းသို့ပုံမှန်လာပြီး ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသည်မှာ အဓိကအကြောင်းတရား ပင်ဖြစ်သည်။''ဟောပြောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ကြားနိူင်ကြမည်နည်း။''
ဧဝံဂေလိတရားဟောချက်က အပြစ်သားသည် ခရစ်တော်ထံပါးသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ် ခြင်းမရှိလျှင် ကြမ္မာဆိုးဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြုံရသည်ကို ပြသရမည်။ အပြစ်တရားသည် သူ့ဘဝ ဇစ်မြစ်တွင်အမြစ်တွယ်နေကြောင်းကို သူ့အားပြသရမည်။ ''ပြစ်မှားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အပြစ်ဒု စရိုက်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် အပြစ်သားကို ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာစေသည်။ အပြစ်တရားသည် ပုန်ကန်ခြင်းနှင့်တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အပြစ်သားသည် ပျောက်သောသားကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်ကြောင်းကို သိရှိနားလည် စေရမည်။တကိုယ်ကောင်းဆန်ကြောင်းလည်း သိစေရမည်။အပြစ်သားသည် နှလုံးသားထဲ၌ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲလာကြောင်းတွေ့မြင်ရသည်အထိ ထိုသို့သောတရားဟောချက်မျိုးကို ပလူးပစ်ထက်တွင်ကြားနာရမည်။ အပြစ်သားသည် နှလုံးသားပြောင်းလဲစေရန်အမှန်တ ကယ်ကြိုးစားအားထုတ်သည်အထိ အလေးထားဆောင်ရွက်ရပေမည်။ နှလုံးသားပြောင်းလဲ စေရန်သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည် အမြဲတမ်းကျဆုံးရပေမည်။သူ၏ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောသမ္မာတရားတွင် အပြစ်သားဆက်လက်နိူးထလာစေရန်ဤကျ ဆုံးခြင်းဖြစ်ပေသည်။သူသည် ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုရပေ မည်။ခရစ်တော်ကို ဆာငတ်တောင့်တရန်လည်းပြောဆိုရပေမည်။ကျဉ်းသောတံခါးဝသို့ဝင်လို သောစိတ်ရှိရန်လည်းတိုက်တွန်းရပေမည်။ (လုကာ ၁၃း၂၄ )အပြစ်သားသည် ကြိုးစားလေ ရှုံးလေ၊ ကြိုးစားလေရှုံးလေဖြစ်လာသောအခါ နောက်ဆုံးတွင် မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာပျောက် ဆုံးကြောင်းကိုခံစားလာရပေမည်။ဤသည်မှာ သူတိတိကျကျခံစားရမည့် သို့မဟုတ် ခရစ်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းမခံစားရမည့်တိကျသည့်နည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ခေတ်ဟောင်းကျွမ်းကျင်သောတရားဟောဆရာများက အပြစ်သားများ မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမျှော်လင့်ချက်စွန့်လွှတ်သည်အထိ လုပ်ဆောင်ရသည့် ပညတ် တော်တရားဟောချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာ ''ပညတ်တရားသည်ဒုုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှား စေသည်'' (ရောမ ၃း၂ဝ )ဟုဆိုသောကျမ်းပိုဒ်၏ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူဖြစ်ရန် ကျရှုံးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိရန်ကျရှုံးခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် ခရစ်တော်ထံပါး တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရန်ထပ်ခါထပ်ခါကျရှုံးခြင်းသည် ''ငါအမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးသည်''ဟု အ ပြစ်သားကို စတင်၍တွေးထင်စေသည်။ ယင်းမှာ အပြစ်သားတွင်ရှိရမည့်နိူးထမှုဖြစ်သည်။
''သူသတိရလာလျှင်.......သေအောင်အငတ်ခံရ၏။ ငါထ၍၊ အဘထံသို့သွားမည်။'' (လုကာ ၁၅း၁၇-၁၈ )
ဤအချက်တွင် အပြစ်သားသည် ကောင်းသောအရာရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကောင်း သောနည်းလမ်းတွင်လုပ်ဆောင်သောအခါ သူသည်မိမိကိုယ်ကို''သတိရလာပြီး'' နိူးထလာ ကာ မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာမရှိသောကြောင့်ခရစ်တော်၌မှီခိုရမည် ကိုသိရှိလာမည်။
သတိရလာသောအခါပျောက်သောသားသည်''မိမိကိုယ်ကိုမသိရှိမှီ''၊စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းမရှိမှီ ဘိုင်ယန်ဖြတ်သန်းကြုံခဲ့ရသကဲ့သို့ ခက်ခဲကြမ်း တမ်းသောလောကငရဲကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်''နောင်တ''ဟူသော ဂရိစကားလုံး သည် ''စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်း''ကိုဆိုလိုသည်။ဤသည်မှာ ''တတိယမြောက်နည်းလမ်းဖြစ် သည်။''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း''ဟုလည်းခေါ်သည်။ ''ကျွနု်ပ်သည်ဘာမျှမဟုတ်သော်
လည်း မှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိပြီးပုန်ကန်သောအပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။'' ''ကျွန်ုပ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိပါ။'' ''ကျွန်ုပ်ဒုက္ခထဲကျရောက်ပြီ။'' ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲ လိုသော်လည်း မပြောင်းလဲနိုင်ပါ၊ မပြောင်းလဲနိူင်ပါ၊ မပြောင်းလဲနိူင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစား ကြည့်သည်၊ ကြိုးစားကြည့်သည်၊ ကြိုးစားလေလေ မဖြစ်နိူင်လေလေဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ် နောင်တမရနိုင်ပါ၊ မပြောင်းလဲနိုင်ပါ၊ မပြောင်းလဲနိူင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်နှလုံးကို မပြောင်းလဲစေနိူင် ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးပြီ၊ ပျောက်ဆုံးပြီ၊ ပျောက်ဆုံးပြီ။'' ဤုသည်မှာ မာတင်လူသာ၊ဘိုင် ယန်၊ ဂျွန်ဝယ်စလီ၊ ဝှိုက်ဖီးလ်၊ စပါးဂျွန်၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဆန်းတို့အသက်တာများတွင်ဖြစ်
ကောင်းပေစွ၊၊ နောက်ဆုံးတွင် ထိုသို့သင်ခံစားလာသည်ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်ဝမ်းမြောက်မိ သည်။ ယခုတွင် ခရစ်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်ရရှိကောင်းရရှိပေမည်။ သင်သည် မိမိ ကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သင့်ကိုကယ်တင်နိူင်ရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့တွန်းပို့ပေး သောသူ၏မေတ္တာကိုရရှိခံစားပေမည်။ သင်၏ကိုယ်စားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံပြီး သင့်အပြစ်များကိုဆေးကြောသန့်စင်စေရန် အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည့်အတွက် ခရစ်တော် ကိုသင်ကျေးဇူးတင်နေပေမည်။စစ်မှန်သော ''ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း'' တွင် သူ၏ ကျေးဇူးတော်၊ မေတ္တာ နှင့်ကယ်တင်ခြင်းကို လက်တွေ့မြည်းစမ်းခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ ကျန်ရှိ နေသေးသောသင့်ဘဝအသက်တာအတွက် ယေရှုကိုကျေးဇူးတင်နေမည်။ ၄င်းသည်သာလျှင် သင့်စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေပြီး ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှ သင်၏ဝိညာဉ်ကို ကယ် တင်နိူင်ခဲ့သည်။ ''လွယ်ကူသောယုံကြည်ခြင်းဝါဒ'' နှင့် ''သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း'' မှ အလွန်ခက်ခဲကြောင်းကို သင်တွေ့ရှိရမည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။သင်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ၏အဖိုးထိုက်သောအသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းခံရသည်ဖြစ်၍ ဤ အရာကိုတွေ့ကြုံရမည်အကြောင်းဆိုတောင်းပါ၏။ထို့နောက် ချားလ်ဝယ်စလီနှင့်အတူသီဆို ချီးမွမ်းနိုင်စေရန်တောင်းဆုပြုပါ၏။
ယေရှု ၊ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောသူ၊ ကိုယ်တော်ရင်ခွင်ထဲခိုနားပါရစေ
ကောင်းကင်ဗိုလ်ပါခြံရံလျက်သာ၊ ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ် လုံခြုံစေပါ
(ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှု ၊ ချားလ်ဝယ်စလီ ၁၇ဝ၇-၁၇၈၈)
အပြစ်မှယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ပြောဆိုဆွေးနွေးလို လျှင် သင်၏ထိုင်ခုံကို ချန်ထားပြီး ပရိတ်သတ်ကြားနာရာအခန်းနောက်ဘက်သို့လျှောက် လာပါ။ Dr. Cagan ကပြောဆိုဆွေးနွေး၍ရသောအခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပေမည်။ Dr. Chanယနေ့ည၌ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသောသူရှိလာစေရန်ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်း ပေးပါ။ အာမင်......။
တရာဒေသနာမတိုင်မှီနှုတ်ကပါတ်တော်ဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme
မှဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုကာ ၁၅း၁၄-၁၉
တရားဒေသနာမတိုင်မီ ]] ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှု}} သီချင်းအားဖြင့် Mr. Benjamin Kincaid Griffith မှချီးမွမ်းသည်။
(ချားလ်ဝယ်စလီ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ မှ သီကုံးရေးစပ်ထားသည်။)
ယနေ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ''ရှင်းပြတရားဟောခြင်း''သည် ခေတ်စားလာပြီး တရား ဟောသည့်ပုံစံနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဟောသူများအပေါ် အငြင်းပွားမှုများရှိသည်။ တရား ဟောသူ၏အလုပ်မှာ ကျမ်းပိုဒ်၌မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပြီး အခြားသူများအသက်တာတွင်ရှင်း လင်းသောအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်စေမည်ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော် ဖြစ်ကြောင်းမသိသူများးကိုကယ်တင်ရန်သဘောမတူနိုင်သူနှင့်ဆွေးနွေးရန်မရှိတော့ပေ။
သို့သော်''ရှင်းပြတရားဟောခြင်း''သည် တခါတရံ တစ်စုံတစ်ရာကိုပို၍ အဓိပ္မါယ်ရှိ စေသည်။ အပတ်တိုင်း စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် သို့မဟုတ် ကျမ်းစာကို ပရိသတ်များအားဟောကြား ခြင်းကို ဖော်ပြရန် စကားစုကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကို ဒီတနင်္ဂနွေနေ့သည့်နောက်တနင်္ဂနွေနှင့်တိုက်ရိုက်ပါတ်သက်မှုမရှိစေဘဲ တရားဟောချက် တစ်ခုစီမတူညီသည့်နည်းစနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်''ရှင်းလင်းချက်''နည်း စနစ်ဖြင့်စိတ်ပျက်သွားကြသည်။
ဤ''ရှင်းပြတရားဟောခြင်း''ရှုထောင့်သည်အဘယ့်ကြောင့်နှိုင်းယှဉ်လျက်ခေတ်စားလာ ပါသနည်း။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ခြင်းသည် တရားဟောခြင်းအဆင့်အတန်းကိုမြင့်မားစေကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။သမ္မာကျမ်းစာ၏အစီအစဉ်လိုက် ကိုင်တွယ်မှုအားဖြင့် တရားဟောသူကို ထပ်တ လဲလဲပြောသောအကြောင်းအရာထဲမှ နှုတ်ဆောင်ကာ ပရိသတ်သည်ပို၍အမြင်ကျယ်လာပြီး သမ္မာတရားဆုတ်ကိုင်မှုတွင်လည်းအသိဥာဏြွ်ကယ်ဝလာသည်ဟုဆိုပေသည်။တရားဟောသူ အားလည်း ထိုအရာများမတိုင်မှီမည်သည့်အရာဖြစ်ပေါ်လာသည်ကုသူနှင့်လူများသိရှိလရန် သမ္မာကျမ်းစာစဉ်ဆက်စူးစမ်းရှာဖွေမှုများအတွက်ကယ်တင်ထားသည်။ ဤအကြောင်းတရား များကို အနည်းငယ်ကိုသာလိပ်မူခြင်းတစ်ခုတွင်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုကို လူသိများသော ကျွနု်ပ်တို့၏ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့်ကွန်ဖရင့် တရားဟောဆရာက ဆွေးနွေးလိုက်သောအချက် အားဖြင့် ငယ်ရွယ်သောတရားဟောဆရာအတွက်အတည်ပြုပေးထားသည်။ထို့အပြင် ဤအ ရာများသည် ၄င်းတို့၏နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြသောအခါ အကောင်းဆုံးတရား ဟောခြင်းနည်းလမ်းပုံစံအဖြစ်် သူတို့ကိုမှတ်ယူသည်။ အခြားအမျိုးအစားတစ်စုံတစ်ရာ၏ ထုတ်ဝေသောတရားဒေသနာများသည် အလွန်နည်းပါးပြီး၊ ထုတ်ဝေသူများအတွက် သူတို့ ၏ခေတ်စားမှုအခြေခံတရားအပါ် ''ရှင်းလင်းမှု'' သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။
သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ရှုထောင့်အရ ဤတရားဟောချက်ရှုထောင့်၏အကျိုးဆုတ် ယုတ်မှုသည် စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည့်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။
၁။ တရားဟောကြားသူအားလုံးသည် ဤနည်းစနစ်အားဖြင့် အကျိုးရှိသော တရားဒေသနာကိုပေးစွမ်းနိူင်ကြမည်ဟု ယူဆမိသည်။ သို့ရာတွင် လူတို့တွင် ခက်ခဲသောဆုကျေးဇူးများရှိကြသည်။ စပါဂျွန်မူကား ''ရှင်းပြတရားဟောခြင်း'' နှင့်လုံးဝမရင်းနှီးပါ။ထို့ကြောင့် သူ၏ဆုကျေးဇူးနှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိကြောင်းဆုံး ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ထိရောက်သော''ရှင်းပြ'' တရားဟောခြင်းသည် အားလုံးအ တွက်မဟုတ်ကြောင်းစဉ်းစားစရာရှိပြန်သည်။ Dr. Lloyd-Jones ''ရှင်းပြတရားဟောခြင်း''ကိုမိတ်မဆက်ပေးမှီ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ခန့်အမှုတော် ၌ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂။ သမ္မာကျမ်းစာအများစုကိုလွှမ်းခြုံနိူင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ''ရှင်းပြ'' တရားဟောခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုချက်သည် တရား ဟောခြင်းရည်ရယ်ချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာကိုများနိုင်သလောက်ပို့ဆောင်ပေး ရန်ဟူသောယူဆချက်နှင့်များစွာတစ်ထပ်တည်းကျပေသည်။သို့သော်ထိုအတွေးအခေါ်ကိုစိန်ခေါ်ရန်လိုအပ်လာပေသည်။ တရားဟောခြင်းသည် ညွှန်ကြားခြင်း ကိုယ်စားလှယ်ထက်များစွာလိုအပ်ပေသည်။အလင်းလင်းပြီးနေ့စဉ်သမ္မာကျမ်းစာ ကျောင်းသူ/သားများဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ တကြွ်ကပြီး ယောကျာ်းနှင့်မိန်း မများကိုနိူးဆော်တိုက်တွန်းတတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တရားဟောဆရာသည် အများ၏လက်ထဲတွင် တရားဒေသနာပေးခြင်းထက် ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းအ သုံးအနှုန်းတွင် သူ၏အလုပ်ကိုအခြေခံကျကျသိမြင်လျှင် နောက်ဆုံးတွင် အလွန်နူးညံ့သောအပတ်တိုင်းသင်တန်းခန်းဖြစ်လာပေမည်။ သို့သော် စစ်မှန် သောတရားဟောချက်တွင်ဆက်လက်တိုးပွါးရန်အရေးကြီးပေသည်။
၃။ စကောတလန်တွင်ရှိသောအသင်းတော်တွင် ''တရားဒေသနာ''နှင့်''သင် ကြားပို့ချမှု''ကြားတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ကွဲပြားခဲ့သည်။ ''သင်ကြားပို့ချမှု''ဟူ သောစကားလုံးကို ကဲ့ရဲ့သောအဓိပ္ပါယ်ဖြင့်အသုံးပြုထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျမ်း ပိုဒ် သို့မဟုတ် စာအုပ် ကိုအစဉ်အလိုက် ကိုင်တွယ်မှုတည်းဟူသော ''ရှင်းပြ တရားဟောခြင်း''အားဖြင့်အဓိကဆိုလိုသောအရာကို ဆိုပေသည်။ဂျွန်ဘရောင်း၊ အီဒင်ဘတ် တို့သည်လည်း ထိုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော ကြောင့် ရောမသြဝါဒစာစောင်နှင့်ပါတ်သက်သည့်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကို Lloyd-Jones က တရားဒေသနာနှင့်သင်ကြားမှုကြားရှိ ခြားနားမှုဖြစ် သည့် ရှင်းပြချက်''သင်ကြားမှုများ''ဟုခေါ်သည်။ သူ၏အမြင်တွင် ထိုတရား ဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ပါတ်သက်သည့် သင်ကြား မှုသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး ဆက်လက်သွားနေသောအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေကာမူ ထို တရားဒေသနာကိုယ်၌ပင်စုံလင်သည့် တခုလုံးလုံးဝန်းသော ခြားနားသည့် သတင်းစကားဖြစ်သည်။ ရောမသြဝါဒစာစောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်သောအခါ Lloyd-Jones သည် သူ၏ဧဖက်သြဝါဒစာစောင် အကြောင်းအရာများ ကို တရားဒေသနာကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်လာသည်။ထို့အပြင် ဤအကြောင်း အရာနှစ်ခုတွင်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါ တစ်စုံတစ်ဦးက (ပထမကို သောကြာညတွင်လုပ်ဆောင်ပြီး ဒုတိယကိုတနင်္ဂနွေမနက်တွင်လုပ် ဆောင်) ခြားနားမှုကို လျှင်မြန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိူင်ပေမည်။ဤသည် မှာ ရောမသြဝါဒစာစောင်တွင် တန်ဖိုးလျှော့ချရန်မဟုတ်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက် ကွာခြားမှုရှိပေသည်။
၄။ နေ့တစ်နေ့၏နောက်ဆုံးတွင် အကောင်းဆုံးသောတရားဒေသနာမှာတရား နာသူများကို အများဆုံးအကူအညီပေးသော တရားဟောချက်သည် အကောင်း ဆုံးတရားဟောချက်ပေသည်။ ထို့အပြင် ထိုဆက်နွယ်မှုတွင် အစဉ်အလိုက် ''ရှင်းပြသော'' နည်းလမ်း၏ ခြေရာမှတ်တမ်းသည် စိတ်တွင်စွဲငြိထင်ရစ်ခြင်း မရှိပါ။ရေရှည်တွင် ခေတ်စားမည့်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာအ တွက် အကြောင်းပြချက်မှာ ရှင်းနေပေသည်ဟုထင်မိသည်။ တရားဒေသနာ တစ်ခုသည် မှတ်မိနိူင်သော သတင်းစကားတစ်ခုအတွက် အခြေပြုရန်အတွက် အခြေပြုကျမ်းလိုအပ်ပေသည်။ ကြားနာသူ၏စိတ်နှလုံးတွင်ရှိသမျှအရာအားလုံး ကွယ်ပျောက်သောအခါ အခြေပြုကျမ်းကိုမှတ်မိပေသည်။ အခြေပြုကျမ်း သည် ကျမ်းတစ်ပိုဒ်ဖြစ်ခြင်းထက် စာပိုဒ်ဖြစ်သည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံမှန်ကန်ပေ သည်။ ''ရှင်းပြတရားဟောချက်''တွင် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်တတ်သကဲ့သို့ ကျမ်းပိုဒ်အပိုင်းများသည် ''အခြေပြုကျမ်း''ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်အမည်ဆိုလျှင် ယူဆချက်တစ်ခုလုံး၏အပိုင်းများသည် တရားဒေသနာထဲသို့ရောက်ရှိပေမည်။ ရှင်းလင်းသောသင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးသည်ပင်( စပါဂျွန်၏တရားဒေသနာတွင် ထိုသို့သောအရာကို တစ်စုံတစ်ဦးကတွေ့နိူင်ပေသည်။) ပျောက်ဆုံးသွားပေ မည်။ တရားဟောသူသည် မှတ်ချက်ပေးသူသာဖြစ်လာပေမည်။ တခါတရံသူ သည် သူကြံစည်ထားသည့်စာပိုဒ်ရှိ အခြေပြုချက်ကိုပေးရန်လည်းရပ်တန့်စေ တတ်သည်။ သို့ရာတွင် လူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏တူညီသောအပိုင်းသင် ကြားခြင်းစာအုပ်ကိုရယူခြင်းအားဖြင့်် တူညီသောအကူအညီကိုရယူကြသည်။ ပို၍လည်းကောင်းနိူင်ပေသည်။ Lloyd-Jones ၏ဧဖက်သြဝါဒစာအ ကြောင်းအရာသည် ရှင်းပြခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပေါ်အခြေပြုသည့်ဟောကြား ချက်မဟုတ်ပေဘူးလားဟူ၍လည်းကောင်း၊ သူသည်တချိန်း၌အနည်းငယ်သော ခေါင်းဆောင်မှုအတွေးအခေါ်ကိုသာတွန်းအားပေးလည်းတိုးတက်မှုသည်မဟုတ်ပါလောဟူ၍လည်းကောင်း၊ အခြားသူများက အဘယ်ကြောင့်လုပ်နိူင်စွမ်းမရှိ ရမည်နည်းဟူ၍လည်းကောင်း''မေးမြန်းကြသည်။ အဖြေမှာ Lloyd-Jones သည် ဧဖက်သြဝါဒစာစောင်တွင် အကြောင်းအရာအားဖြင့်ဟောကြားခြင်းနှင့် ရှင်းပြဟောကြားခြင်းနှုစ်ခုစလုံးကိုတွဲထားသော်လည်း ၄င်းမှာ တရားဟောသူ အများစုတွင်မရှိသော ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးပေတည်း။ အတွေ့အကြုံမရှိ သူအများဆုံးက ဒုက္ခရောက်ခါနီးအကျိုးကျေးဇူးများအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အဓိကစာအုပ်များကို တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် ဟောပြောရန်ကြိုးစားကြသည်။ ဤသည်မှာ ပြုပြင်တရားဟောကြားခြင်းသည် တစ်နေရာတွင်သာမက ''ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော'' သို့မဟုတ် တုံးသော တရားဟောချက်အဖြစ် ဝေဖန်ရသည့်အကြောင်းရင်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။''ရှင်းပြတရား ဟောချက်''ကို စွဲကိုင်သော ရည်မှန်းချက်နည်းပါးသောသူသည် သူတို့၏အ ကြောင်းအရာတွက်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုရန်မကြိုးစားပေ။ထို့အပြင် ၄င်းသည် ဖြေရှင်းချက်ဆီသို့ရောက်သွားရန်ပင်လွယ်ကူလွန်းလှသည်မှာ အန္တရယ်ဖြစ်ပေသည်။
၅။ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းသည်''ရှင်းပြ'' တရားဟောပုံစံနှင့်အပ်စပ်မှု မရှိပေ။တကယ်တော့ ''ရှင်းပြ'' တရားဟောကြားသည့်နေရာတွင် နှလုံးသား နှင့်သြတ္တပအား စစ်မှန်သည့် ဧဝံဂေလိဟောကြားခြင်းသည် ကွယ်ပျောက်ပေ သည်။ ဤသည်မှာ မှန်ကန်မှုအမှန်တကယ်ရှိခဲ့လျှင် ကျမ်းပိုဒ်မဟုတ်ပဲ လူ၏အမှားသာဖြစ်ပေမည်ဟုဆိုနိူင်သည်။ အကြောင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာရှိသမျှ သည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားပေသည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ပျောက်သောသူတို့ကို နိူးထစေပြီး ရှင်စေရန်နှုတ်ကပါတ်တော်ကို အသုံးပြုပေ သည်မှာ အမှန်ပင်မဟုတ်ပေဘူးလား။ ထိုသို့ဖြစ်နိူင်သည်။ သို့သော် ခရစ် ယာန်မဟုတ်သောသူများကို ပြောဆိုရန် ပြောင်းလဲစေသော သမ္မာတရားရှိ ကြောင်းကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပေသည်။၄င်းသမ္မာတရားတွင် လေးနက်သည့် ဧဝံဂေလိအမှုတော်လုပ်ငန်းအများဆုံးတွင် ထူးခြားပြီး ပုံမှန် အရေးပါခြင်းရှိပေသည်။အတိတ်ကာလတွင် အပြစ်သားများ၏ပြောင်းလဲခြင်း၌ အများဆုံးအသုံးပြုသောလူများသည် ဝှိုက်ဖီးလ်၊ အမ်စီချယ်လ်နီ၊ စပါဂျွန်၊ လွှိုင်ဂျုံး နှင့်အခြားဘုရားသခင်၏လူများသိရှိသောအကြောင်းအရာကို သိရှိခဲ့ ကြသည်။ယနေ့တွင် သူတို့၏မေ့လျှော့ခြင်းများကြောင့်အန္တရယ်ရှိပေသည်။ ''လူသည် ဤစင်္ကြဝဠာကိုအြွကင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးလျှင်အ ဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း''ဟူသောတရားဒေသနာ နောက်ဆုံးသင်ကြားခဲ့သောအ ချိန်ကားအဘယ်နည်း။
ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုအားဖြင့် အစီအစဉ်ကျသောတရားဟောကြားခြင်းယူဆချက်တစ်ခုလုံး သည် မှာယွင်းသည် ဟူသည်မှာ အငြင်းပွားမှုမဟုတ်ပါ။ တရားဟောစင်သာသနာတွင် သီးသန့်နေရာတစ်ခုကိုခွင့်ပြုမထားရပေ။ တရားဟောဆရာတစ်ဦးသည် သူအကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာကိုရှာဖွေပါစေ။မည်သို့သော နည်းလမ်းအားဖြင့် သမ္မာတရားကို ဝေငှပါစေ၊ ထိုအချိန်နာရီတွင် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် တရားဟောသူသည် ပြည့်ဝစုံလင်ရပေမည်။ ထိုထက်မက မှန်ကန်စွာသင် ကြားပေးခြင်းသည် သာ၍လိုအပ်ပေသည်။ ပရိသတ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို လှုပ်ခတ်သောတရားဒေသနာလိုအပ်ပေသည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောအကြောင်းအရာသည် 0x္ထုဖြစ်သည်ဟု တစ်စုံတစ်ဦးက တွေးထင်မိမည်ကိုစိုးသဖြင့် နောက်ဆုံးရာစု၏အကြီးမားဆုံးတရားဟောဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည့် အာရ်ဘီကွီဗာ၏ယူဆချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်လိုပါသည်။သူ၏အကြောင်းကိုရေးသားသောသူက သူသည် အပိုင်းလိုက်ပုံစံ သို့မဟုတ် ကျမ်းစာအုပ်တွင်ပေးထားသော တရားဒေသနာကို အသုံးချရန် ''ရှင်းပြခြင်း''ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်ထားကြောင်း ရည်ညွှန်း ထားသည်။နှုတ်ကပါတ်တော်သည်သာ ထိုက်တန်သောနာမည်တွင် သမ္မာကျမ်းစာရှင်းလင်း ခြင်းတစ်ခုလုံးကို အသုံးချသင့်သည်။ ဆက်လက်၍ ဤသို့ဆိုထားသည်။
''ရှင်းပြတရားဟောခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ထောက်ခံရန်မှာ အရမ်းအရေးကြီးသည့်မှာယွင်းမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်းများနောက်ကွယ်တွင် ရှင်းပြတရားဟောခြင်းကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ဟု အလွန်အမင်းချီးကျူးရန်မှာလည်း ကျေနပ်စရာအမှုမဟုတ်ပေ။ တရားဟောချက်အားလုံးသည် ရှင်းပြတရားဟောချက်ဖြစ်ရမည်။ သူက သမ္မာကျမ်းစာ၏ချဲ့ကားထားသည့်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အနက်ဖွင့်ခြင်းသိုု့သာ ရောက်နေသော ကိုင်စွဲထားသည့်ယူဆချက်ကို ရှင်းပြတရားဟောခြင်းဟုခေါ် ဆိုနိူင်ကြောင်း သဘောတူလက်ခံသည်။ ကွီဗာ၏အဆိုအရ အနက်ဖွင့်တ ရားဟောခြင်းပုံစံတွင်အမှားပါရှိကြောင်းဆိုသည်။အကြောင်းအရာများစွာကိုပါ ဝင်စေသည်ဖြစ်၍ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်အပေါ်ယံမျှုသာဖြစ်ရန်ကြံရွယ်ထားပါ သည်။ထိုကဲ့သို့သောတရားဒေသနာသည်ရံဖန်ရံခါတွင်စည်းလုံးမှုလိုအပ်နိုင် သည်။ထို့ကြောင့်တရားဒေသနာ၏အကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ ကြားနာသူများ နားမရှင်းဖြစ်တတ်ပေသည်။''၂ တရားဟောသူသည်
မည်သို့သောနည်းလမ်းကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ ကွီဗာ၏အောက်ပါစ ကားလုံးများကား အားလုံးအတွက် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။
'ရိုးစင်းသောလည်း တွန်းအားပြည့်သောဝေငှချက်သည် လေးစားမှုနှင့်တုန့်ပြန် မှုနှစ်ခုစလုံးကိုတောင်းဆိုပေသည်။စိတ်အားထက်သန်မှုက လှုံဆော်ပေးသည်။ ယုတ္တိဗေဒက နားလည်စေပြီး ကျိုးကြောင်းမညီညွတ်ခြင်းက ရှုတ်ထွေးစေ သည်။တရားဟောသူတစ်ဦးအနေဖြင့် နှလုံးသားတစ်ခုရှိပါစေ။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြားနာပရိသတ်များကို ငြီးငွေ့စေခြင်းကို ရပ်တန်းကရပ်ပါစို့။ကျွန်ုပ်တို့၏တ ရားဒေသနာကို ပို၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် ပုံဆွဲလိုသောကလေးများ ပုံဆွဲခြင်းထက် နားထောင်လာစေရန်နှင့်ကလေးများပုံဆွဲရန်စာရွက်နှင့်ခဲ့တံများ ထောက်ပံ့ပေးသောမိဘများအရှက်ရစေရန်ပြုလုပ်ကြပါစို့။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ သောတရားဟောချက်၏ကြိုတင်လိုအပ်ချက်သည်အပင်ပန်းခံလုပ်ဆောင်ရသော ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုလည်း ပြင်ဆင်နိူင်ပေသည်။''၃
၁။ ကျွနု်ပ်သည် ဤအရာအတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ''ရှင်းပြတရား ဟောခြင်း'' ပုံနှိပ်စာမျက်မှာတွင်ပေါ်ထွက်လာသည့်ကောင်းသည့်အကြောင်းရင်းများရှိသည်။ သို့ရာတွင် စာဖတ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးသည် ကြားနာသူအဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု အဆုံးသတ်ရန်မှာ အန္တရယ်ရှိပေသည်။ ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်သည် မတူညီ သော အရာနှစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၂။ Edward Heerema, R. B., တိုင်းပြည်အတွင်းရှိပရောဖက်တစ်ပါး (Jordan Station, Ontario; Paideia, 1986), စာ-၁၃၈-၉ ။
၃။ ထပ်၍- စာ၊၂ဝ၄ ။
''တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊တစုံတယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယော်ရှိ၏။ သားအငယ်သည်အဘထံသို့သွား၍၊အဘ၊အကျွန်ုပ်််ရထိုက်သောအ မွေဥစ္စာကိုဝေ၍ပေးပါဟုတောင်းပန်လျှင်၊အဘသည်ဥစ္စာများကိုဝေ၍ သားတို့အားပေးလေ၏။ထို့နောက်များမကြာ၊သားအငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုသိမ်းယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့သွားပြီးလျှင်၊ထိုပြည်မှာကာမ ဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအားဖြင့်ဥစ္စာဖြုန်းတီး၍၊ရှိသမျှကုန်သောအခါ၊ထို ပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်၍၊သူသည်အလွန်ဆင်းရဲ ခြင်းသို့ရောက်၏။ထိုအခါပြည်သားတစ်ယောက်ထံသွား၍အစေခံလျှင် ဝတ်တို့ကိုကျောင်းစေခြင်းငှါသူ့သခင်သည်တောသို့စေလွှတ်သဖြင့်သူသည်ဝတ်စားတတ်သောပဲတောင့်ကိုပင်စားချင်မတတ်ငတ်မွတ်လျက် နေရ၏။အဘယ်သူမျှအစာကိုမကျွေး။ထိုအခါသတိရလျှင်ငါ့အဘ၏ အိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝစွာစားရကြ၏။ငါမူကား၊ဤပြည်၌သေအောင်အငတ်ခံရ၏။ငါထ၍အဘထံသို့သွားမည်။အဘ၊အကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ကို၄င်း၊ ကိုယ်တော်ကို၄င်း ပြစ်မှားပါပြီ။ ယခုမှစ၍ကိုယ်တော်၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။သူငှါးအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါ။'' (လုကာ ၁၅း၁၁-၁၉)
(ယောဟန် ၅း၃၉၊၄ဝ၊ လုကာ ၁၅း၁၇၊ ၂တိ ၃း၁၅၊ ဧဖက် ၂း၈၊
တမန် ၁၆း၃၁၊ ကောလောသဲ ၁း၁၇ )
၁။ ပထမအချက်-တတိယနည်းလမ်းတွင်ရှိသည့် ''ပြောင်းလဲခြင်းအ
ချက်။ (လုကာ ၁၅း၁၃၊ ဟေရှာ ၅၃း၃၊ ရောမ ၈း၇၊ ဧဖက်
၂း၁၊ ရောမ ၃း၉၊၁ဝ၊ ဟေရှာ ၁း၅၊၆၊ လုကာ၁၅း၁၅၊၁၆၊
ဧဖက် ၂း၂၊၅၊ လုကာ ၁၅း၂၄)
နည်းလမ်းတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အပြစ်သားတစ်ယေါက်
ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ( လုကာ၁၅း၁၇၊ ဧဖက်၅း၁၄၊ ရောမ
၁ဝး၁၄၊ ဠုကာ ၁၃း၂၄၊ ရောမ ၃း၂ဝ၊ ဠုကာ ၁၅း၁၇-၁၈)